Talaabooyinka Sahlan ee Email Multiple Photos ka Your iPhone
iPhone uu maray noocyo kala duwan oo evolutions tan iyo xagaagii 2007. Hadda, kuwa iPhone ma noolaan karaan iyaga oo aan, iyo qaar ka mid ah inta badan ay ganacsi sameeyaan si toos ah ka iPhone. Taasi waxaa ka mid ah qaadashada iyo email sawiro badan ka iPhone ay. Iyadoo isbedel dhowaan ka dhacay qaabka iPhone, waxaa laga yaabaa in wax ka mid ah oo caqabad ku ah si loo ogaado sida ay u email sawiro badan ka iPhone. Ha ka werwerin. By hubinta warbixinta soo socota, waxaad yeelan doontaa in ay email sawiro badan ka iPhone in saaxiibadaa, wada-hawlgalayaasha, qoyskaaga iyo naftaada xitaa si fudud.
Qaybta 1. Sida loo Isticmaalo iPhone in Email Multiple Photos
Qaybta 2. Dhibaatooyinka u soo dirayso Multiple Photos on iPhone
Tallaabada 1 Tag Photos ka App,. Waayo, kuwa laga yaabo in ay aqoon goobta saxda ah ee app this, app Photos la heli karaa guud ahaan shaashadda guriga ee iPhone 5. Waa app ka wakiil ah gabbaldayaha.
Tallaabada 2 Dooro mid ka mid Roll Camera ama Album gaar ah:. Dooro goobta aad telefoon in aad rabto in aad ka heli sawirka. Shaashadda halka aad ka heli lahaa doorasho tan ekaan karaa sidan:
Talaabada 3 taabo button ka xulo:. taabo button ka dooro si ay u doortaan image (s) in aad rabto in aad u soo dirto via email. Button Tani waa geeska gacanta midigta sare ee shaashada, iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u doortaan sawiro badan. Iyadoo sawir kasta oo aad doorato, waa in aad ku taxan ee cad oo muujinaya ilaa image ka. Taas macnaheedu waa in aad si guul leh loo doortay sawirada. Checkbox ayaa had iyo jeer waxay noqon doontaa oo cad, laakiin wareegga waxaa laga yaabaa in sidoo kale casaan ama buluug ah.
Tallaabada 4. Touch Button Share, oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la dhagaystayaasha loo doortay wadaagaan images gaar ah. Tan waxaa ku yaalla geeska bidix ee hoose ee shaashadda, iyo sida sanduuq yar fallaadh u muuqataa.
Ka dibna lagu siin doonaa taxane ah oo fursadaha ku saabsan sida aad la wadaagi karto sawiradaan. Dooro Dooro Email: baad tegaysaa in ay aragto in, waa in aad la doortay sawirada aad u tiro badan, ma waxaad yeelan doontaa "email" sida khiyaar ah. Waxaa oo dhan waxay ku xiran tahay waxa size sanamyada hore waa; haddii tiirarkii aad u badan tahay, ma heli doontid fursad u diro in ka badan labo mar walba. Sheeg qaataha, oo ka dhacay diri!
Waxaa jira qaar ka mid ah dhibaatooyin ah oo dhici kara marka la isku dayayo in ka iPhone email images sidoo. Waxay u baahan yihiin in la tixgeliyo marka aad isku daydo inaad email ka badan hal sawir mar.
Size Image yahay mid weyn: Haddii aad leedahay images badan halkaas oo tirada badan yahay xadka ugu badan ee la ogolyahay ugu software email. Waxaa laga yaabaa inaad dib isugu habayn size image ama ka fiiri yaabo diraya emails badan u soo dirto oo sanamyadeedii aad rabto in aad soo dirto.
Arrimaha MMS: Qaar ka mid ah dadka isticmaala ku soo maray qaar ka mid ah ku adag tahay in diraya sawiro dhex MMS fariimaha. Tani waa sababta oo ah haddii Wi-Fi waa in la isticmaalo, MMS Fariin ma u muuqdaan in ay si waxtar leh u shaqeeyaan. Tani waxaa kaliya oo u muuqata in ay ka mid noqoto arrinta la MMS fariimaha oo aan la siyaabo kale oo diraya sawirada.
Photo Email muuqata "Cabsi darteed": Waxyaabaha u muuqdaan in ay la socday iyo sidoo kale aad u diraya images dhex email ka iPhone, ka dibna iPhone uu u muuqdo inuu ku caburin ama furin. Solutions in ay arrintan u muuqdaan in ay ahaato bedelay SIM ee telefoonka ama xaqiijinaya in internet-qeybiye aad si dhab ah u shaqeeya ay heerka ugu fiican.
Email uusan ahayn mid si dhab dir Photo: Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in ay tagaan goobaha email aad hoos guud si loo ogaado haddii aqoonsiga yihiin run ahaantii saxda ah. Haddii ay tahay, mar kale aad isku daydo in ay ku guul darreysatay oo in, barkinta xisaabta xira.
Your Qaataha aanu helin Quraanka: Hubi in aad qaataha waa ay awoodaan in ay helaan images ee size ay qarka u saaran inuu.
Waxa weeye geedi socod si caddaalad ah oo fudud u soo dirto sawiro via email aad iPhone. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah arimaha ay aad u karin sidii aad isku daydo inaad soo dirto images, laakiin waxaa sidoo kale jira arrimo in si fudud loo agagaarka shaqeeyay karo. In sidaas la sameeyo, aad si guul leh u soo diri kartaa images via email on your iPhone.
Talooyinka Sida loo Isticmaalo iPhone ku hayso shacabka System Home
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPhone Xiriirada aan kaabta
> Resource > iPhone > Sida loo Email Photos Multiple ka Your iPhone